Nezvedu | Zhejiang Shawei Dhijitari Technology Co., Ltd.
Shawei Dhijitari iri mudunhu reZhejiang, yakavambwa muna 1998, nyanzvi muImukati uye Kunze Kushambadzira Midhiya. Shawei Dhijitari muridzi 11 matavi kwese kuChina, bhizinesi riri kuvhara kubva mukugadzira, kutengesa, kutengesa uye kudhinda.
Iwo wepakati makwikwi zvigadzirwa ndeAko Anonamira Akateedzana, Chiedza Bhokisi Series (Frontlit uye Backlit), Wall Kushongedza Series uye Ratidza Props Sereis. Midhiya inovhara kubva kumaseringi kusvika kumadziro kusvika pasi, inokodzera Dhayi, Rangi, UV, HP Latex, Solvent uye Eco-solvent.Shawei Dhijitari inochengetedza hunyanzvi mukushandisa, pamwe nezvigadzirwa zvitsva zviri kusimukira. mumusika, ichi chiratidzo chinofukidza Huru fomati yekudhinda midhiya uye Max Upamhi ndeye 5M. Uye MOYU brand ino gonesa "PVC Yemahara" yekudhinda midhiya kuti ipindure kuGreen Environment Dziviriro.
Shawei Dhijitari inogona kupa saizi dzakasiyana kubva kuJumbol roll, mini roll kumashiti uye saizi yeA3 / 4. Edza nepatinogona napo kusangana nezvako zvaunoda zvigadzirwa.Product are hot sales in North America, South America, Europe, southeast Asia
Zvese zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinodzorwa zvakanyanya needu QC system, zvese zvinhu zvinogadzirwa muguruva yemahara shopu yekutengesa uye isu tine yedu R&D yekutarisa kwese kufambira mberi. Zvichakadaro, QC kuyerera inoshandisa epamberi michina kutarisa inline kubva kune yakasvibirira zvigadzirwa kune yekupedzisira zvigadzirwa.
Nhengo dzemhuri yedu yaShawei dzinobata zvese zvakadzama. Tiri kugara pano uye kukura pamwe newe ou kambani. Shawei, MOYU, Gomay mamwe marangi anowana mukurumbira wakanaka mumusika wedu uye isu takapa mhinduro dzakaenzana kune mamwe mabhizinesi anozivikanwa seWalmart, DHL, Pepsi zvichingodaro.
Kuti tipe basa riri nani kumusika, tinogara tichienda kuSGIA, APPP, SIGN CHINA, FESPA kuratidzwa pasirese, kuunganidza vatengi mhinduro uye kugadzira zvinhu zvitsva kwavari.Shawei Dhijitari timu inogona kukupa iwe:
Isu tine yakasimba timu yehunyanzvi muindastiri, makumi emakore ehunyanzvi ruzivo, yakanakisa dhizaini dhizaini, ichigadzira yepamusoro-soro yepamusoro-inoshanda smartequipment.
Zvigadzirwa zvedu zvine mhando yakanaka uye kiredhiti kwatiri kuti tigone kumisikidza akawanda mahofisi ebazi uye vanogovera munyika medu. Uye zvigadzirwa zvinopfuura chiuru zvemarudzi zvinogona kuve zvako zvakaenzana sarudzo.Product mutsetse uri kuvhara kubva mukati nekunze.